Tag: falanqaynta backlink | Martech Zone
Tag: falanqaynta backlink
Sideed kuheli kartaa rajo cusub oo backlink ah? Qaarkood waxay doorbidaan inay ka raadiyaan degello mawduuc la mid ah. Qaarkood waxay raadiyaan tusaha ganacsiga iyo shabakadaha 2.0. Qaarkoodna waxay ku iibsadaan backlinks-ka tiro badan waxayna rajeynayaan waxa ugu fiican. Laakiin waxaa jira hal hab oo lagu xukumo dhammaantood waana cilmi baaris tartame. Shabakadaha isku xira tartamayaashaada waxay u badan tahay inay mowduuc ahaan ku habboon yihiin. Waxaa intaa dheer, waxay u badan tahay inay u furan yihiin wada-shaqeyn dhabarka Iyo adiga